Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Harena Seychelles: fanomezana 5 eo an-toerana haverina mody
Ny fiafaran'ny dia no sarotra indrindra indrindra, saingy tsy mila manao veloma ny paradisa ianao rehefa mandao ny Nosy Seychelles. Ny nosy dia manolotra fanomezana marobe hozaraina amin'ny olon-tianao na hankamamiana fotsiny ho fahatsiarovana ny fandosiran'ny vahiny.
Manomboka amin'ny fofona, amin'ny firavaka, amin'ny asa-tanana ary maro hafa, tsy hisy ny tsy fahampian'ny harena hamerina mody aorian'ny fitsidihana an'i Seychelles.
Ny souvenir vita tanana vita amin'ny fitiavana dia manana toerana manokana hatrany, ary ny vokatra vita eto an-toerana dia mampiasa fitaovana nomen'ny natiora.
Ary tsy mety diso mihitsy ianao amin'ny fanomezana iray izay hanomezana fiheverana maharitra ny lanilaninao any an-trano miaraka amin'ny sakafo kulina toy ny safrona, masala, kanelina, nutmeg, ary lavanila.
Hanitra avy any Seychelles
Tsidiho ireo ala mando sy morontsiraka fasika any amin'ireo nosy, nefa aza miala ao an-tranonao miaraka amin'ny fofona manitra avy any an-toerana. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny fofona zavamaniry any Seychelles hafahafa, ireo menaka manitra ireo dia hamitaka anao amin'ny lavanila mangatsiaka, voasarimakirana mamy sy tononkira mafana. Ny sasany amin'ireo hanitra eo an-toerana dia novokarina tao amin'ny laboratoara fanamboarana ranomanitra tranainy indrindra ao amin'ny faritra. Azo antoka fa hampiaiky volana anao, ireo hanitra ireo dia hoderain'ny olon-tianao ary hitondra anao hiverina any amin'ny tany mafana.
Asehoy ny vatanao misy fitiavana amin'ny vokatra ara-tsindrimandry avy eto an-toerana vita eto amin'ny paradisa madio! Voasaron'ny zavamaniry hafakely, ireo nosy dia manana karazana akora voajanahary sy voajanahary izay namboarina mba hanomezana izay ilain'ny hoditra anao ireo marika novokarina teo an-toerana. Ny fikosoham-bary dia mamerina anao any amin'ny morontsiraky fasika ary manafoana ny hoditrao, ary karazana moisturizer misy fambara lavanila mafana, sira an-dranomasina ary citronella mamy hanome ny hazavanao izany hazavan'ny tropikaly izany.
Firavaka avy amin'ny Saha Edena
Nosy Seychelles dia tranon'ny vakoka UNESCO roa, ny iray amin'izy ireo dia ny Vallée de Mai, voalaza fa fonenan'ny Saha Edena. Ny toeram-pialofana ao amin'ny Praslin dia misy harena sarobidy ao anatin'izany ny palma Coco de Mer tsy manam-paharoa, izay mamokatra voanjo lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, misy ny endemika amin'ireo nosy. Azonao atao ny mampiseho ity voanjo iray ity amin'ny alàlan'ny fitsidihana trano iray na roa miaraka aminao. Ny fametrahana ny tananao amin'ny Coco de Mer dia tsotra kokoa noho izay eritreretin'ny tsirairay; mankanesa fotsiny amin'ireo kioska ao amin'ny Frances Rachel Street any Victoria, ny Seychelles Island Foundation (SIF) na ny Seychelles National Parks Authority (SNPA) ary mividiana iray amin'ireo safidinao, ho azo antoka fa mitondra taratasy fanamarinana tena izy hanehoana fa azo ara-dalàna izany. , ary tsy voaroba. Mankanesa any amin'ny National Biosecurity Agency ao Orion Mall, Victoria mba hahazoana antoka fa tsy hahita olana amin'ny seranam-piaramanidina ianao. Ny voanjo miendrika pelvis mihantsy - samy hafa ny tsirairay - dia azo antoka fa hamorona resaka momba ny fialantsasatrao any paradisa.